तरकारी भन्दा सस्तो शरीर ! वेश्यावृतिमा लाग्नेहरु बढेपछि यहाँ मात्रै २०० रुपैयाँमा बिक्छ शरीर ! – Todays Nepal
तरकारी भन्दा सस्तो शरीर ! वेश्यावृतिमा लाग्नेहरु बढेपछि यहाँ मात्रै २०० रुपैयाँमा बिक्छ शरीर !
यौनकर्मीहरुको लागि छुट्टै रेड लाइट क्षेत्र छुट्याएको छ । त्यस्तै रेड लाइटमा पर्ने कोलकत्ताको सोनागाछीमा यौनकर्मीहरुको कारण निकै परिचित छ । कलकत्ताको यो क्षेत्र बदनाम गल्लिको रुपमा पनि चिनिन्छ । यस क्षेत्रमा महिलाहरुको निकै दयनिया जिन्दगी देखाउने कयौं तश्विरहरु सार्वजनिक भएका छन् ।
यो रेड लाइट क्षेत्रमा रहने केटीहरु बिभिन्न बाध्यताको कारण त्यहाँ काम गर्न बाध्य बन्छन । यहाँ करीब १५ हजार महिलाहरु सेक्स वर्कर बनेर आफ्नो जिन्दगी बिताईरहेका छन् ।
मीडिया रिपोर्टलाई आधार मान्ने हो भने यहाँ महिलाहरु करिव एक ग्राहकको लागि २ डलर यानेकि २०० रुपयाँ लिएर पनि आफूसंग यौन सम्पर्क गराउन बाध्य छन् । यति थोरै पैसामा आफ्नो सरिर बेच्नु यिनीहरुको लागि बाध्यता जस्तै बनेको छ ।
अन्य रोजगारीको अवसर नहुनु र बिबिध कारण यस्तो पेसामा बस्न बाध्य पारिनु यिनीहरुको बाध्यता हो । रिपोर्ट अनुसार हरेक बर्ष यहाँ करीब एक हजार महिलाहरु आउँछन् । यहाँ रहने महिलाहरुले सानो(सानो कोठामा आफुलाई बेचीरहेका हुन्छन् । फोटो फिचरमा हेर्नुहोस् ति महिलाहरुको सानो कोठा र तिनका अवस्था ।
“शेरबहादुर देउवालाई भेट्न गएको थिएँ’, झनक्क रिसाउदै भन्नुभयो तिमीहरूले बनाएको कांग्रेस हो र ?”